सिफारिस भएका प्रदेश प्रमुख : पूर्वउपप्रधानमन्त्रीदेखि मेयरका उम्मेद्वारसम्म !
मुख्य पृष्ठराजनीति समाचारसिफारिस भएका प्रदेश प्रमुख : पूर्वउपप्रधानमन्त्रीदेखि मेयरका उम्मेद्वारसम्म !
विराटनगर, १८ कात्तिक । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले ७ वटै प्रदेशका लागि प्रदेश प्रमुखको नाम सिफारिस गरेको छ । सोमबारको सचिवालय बैठकले सातवटै प्रदेशका प्रदेश प्रमुखहरूको नाम सिफारिस गरेको हो ।
जसमा चितवनका अमिक शेरचन, कास्कीका सोमनाथ अधिकारी, बाँकेका तिलक परियार, सिरहाका धर्मनाथ यादव, झापाका विष्णु प्रसाइँ, काठमाडौंका शर्मिला त्रिपाठी र डडेल्धुराका गोविन्द कलौनी रहेका छन् । यद्यपि, को कुन प्रदेशको भन्ने विषय टुंगो नलागेको नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलले जानकारी दिएका छन् ।
सिफारिसमा परेकाहरूमध्ये तीनजना पूर्वमाओवादी निकट तीन जना छन् । पूर्वएमालेतर्फका चार जना छन् । पूर्वएमालेतर्फबाट सिफारिस भएका चारैजना ओली निकट हुन् । चितवनका अमिक शेरचन पूर्व उपप्रधानमन्त्री हुन् । उनी जनमोर्चा नेपाल हुँदै तत्कालीन माओवादी प्रवेश गरेका थिए । कास्कीका सोममाथ अधिकारी पूर्वसांसद हुन् । उनी प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि कास्की २ मा हुने उपचुनावकाे लागि दाबेदार थिए ।
सिरहाका धर्मनाथ यादव पनि पूर्वसांसद हुन् । उनी अझै नेकपाकाे राजनीतिमा सक्रिय छन् । डडेल्धुराका गोविन्द कलौनी पूर्व एमाले हुन् । झापाका विष्णु प्रसाइँ पूर्वजिविस उपसभापति हुन् । प्रसाइँ नगरपालिकाको मेयरको उम्मेदवार थिए । नेकपाभित्र उनी केपी ओली निकट मानिन्छन्। यता, काठमाडौंकी शर्मिला त्रिपाठी बेपत्ता परिवार समाजकी अध्यक्ष हुन् भने बाँकेका तिलक परिवार पूर्वसभासद हुन् । उनी बाँके क्षेत्र नम्बर १ बाट विजयी भएका थिए ।